၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံးဆု ကို မက်ဆီ ဆွတ်ခူးပြီလို့ သတင်း ပေါက်ကြားမှု ရှိလာခဲ့ . . . - SPORTS MYANMAR
၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံးဆု ကို မက်ဆီ ဆွတ်ခူးပြီလို့ သတင်း ပေါက်ကြားမှု ရှိလာခဲ့ . . .
ဘောလုံး လောက ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမား တဲ့ ရွှေဘောလုံး ဆု ပေးပွဲ အခမ်း အနား ကို မနက်ဖြန် မှာ ပြုလုပ် ကျင်းပ တော့မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပြင်သစ် မဂ္ဂဇင်း က ကြီးမှူးပြီး နှစ်စဉ် ချီးမြှင့် လာတဲ့ ဒီဆု ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း က နာမည်ကျော် အားကစား ဂျာနယ်လစ် တွေ စုပေါင်း ပေးအပ် တဲ့ မဲတွေ အပေါ် မှာ တွက်ချက် ဆုံးဖြတ် တဲ့ ဆုတစ်ခု ဖြစ် ပါတယ် ။ လက်ရှိ မှာ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ က ရွှေဘောလုံး ၅ ဆု စီ နဲ့ အပြိုင် ဖြစ်နေကြ ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် တော့ မက်ဆီ နဲ့ ဗန်ဒိုက် တို့ က ထိပ်ဆုံး ကနေ ရေပန်း စားနေ ကြပါတယ် ။
ဒီလို ဆုပေးပွဲ နီးကပ် လာချိန် မှာတော့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှုး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံး ဆု ကို ဗန်ဒိုက် ၊ ဆာလာ တို့ ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဆွတ်ခူး ရရှိ သွားကြောင်း သတင်း တစ်ပုဒ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
တကယ်လို့ ဒီ သတင်းသာ အမှန် ဖြစ်ခဲ့ ပါက မက်ဆီ ဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝ မှာ ၆ ခု မြောက် ရွှေဘောလုံး ဆု ကို ရရှိ မှာ ဖြစ်ပြီး အရေ အတွက် အများဆုံး ကစား သမား အဖြစ် စံချိန် မှတ်တမ်းသစ် စိုက်ထူ နိုင်တော့ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဆုပေးပွဲ နီးကပ် လာချိန် မှာ ဒီလို သတင်း ပေါက်ကြားမှုတွေ ရှိနေတတ် တာ ကြောင့် မက်ဆီ ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် ရင်ခုန် စရာ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ပေါက်ကြား လာတဲ့ သတင်း မှာတော့ မက်ဆီ ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံး ဆု အမှတ် ပေး ဇယား မှာ နံပါတ် ၁ နေရာ ကနေ ရမှတ် ၄၄၆ မှတ် နဲ့ ဦးဆောင် နေခဲ့ ပြီး ဒုတိယ နေရာ မှာတော့ လီဗာပူး နဲ့ နယ်သာလန် ခံစစ်မှုး ဗာဂျယ် ဗန်ဒိုက် က ၃၈၂ မှတ် နဲ့ ရပ်တည် နေခဲ့တာ ကို တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
တတိယ နေရာ မှာတော့ လီဗာပူး တောင်ပံ ကစား သမား မိုဟာမက် ဆာလာ က ၁၇၉ မှတ် နဲ့ ရှိနေ ခဲ့ပြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ကတော့ ၁၃၃ မဲ သာ ရခဲ့ကာ စတုတ္ထ နေရာ မှာ ရပ်တည် ခဲ့တယ် လို့ ပါရှိ လာခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ ရဲ့ နောက် မှာတော့ မာနေး ၊ အဲလစ်ဆွန် ၊ ဘာပေ ၊ ဖရန်ကီ ဒီယွန် ၊ ဒီလစ် နဲ့ ဟာဇက် တို့ က အစဉ် လိုက် ရပ်တည် ခဲ့ကြ တယ် လို့ သတင်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် ။
မက်ဆီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဘာစီလိုနာ နဲ့ ပြည်တွင်း အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဆု ကို ရယူ နိုင် ခဲ့ သလို လာလီဂါ ၊ ဥရောပ နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ပြိုင်ပွဲတွေ မှာ ဂိုးသွင်း ဘုရင် ဖြစ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဇွန်လ တုန်းက ကစား ခဲ့တဲ့ ကိုပါ အမေရိက မှာလည်း အာဂျင်တီးနား ကို တတိယ ဆု ရရှိအောင် ဦးဆောင် ကစား ပေးထား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီရာသီ မှာ လည်း မက်ဆီ ဟာ ဘာစီလိုနာ အတွက် အလွန် အရေးပါတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ကနေ ပါ၀င် နေခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ဖီဖာ ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆုရှင် ဖြစ်ခဲ့သလို မကြာသေးမီ က မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး Playmaker ဆုကို ရရှိ ထားခဲ့ ပြီး ရွှေဘောလုံး ဆု ကို လည်း ရရှိ လိမ့်မယ် လို့ ခန့်မှန်းမှု တွေ များပြား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဗန်ဒိုက် ကတော့ လီဗာပူး နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ရခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။ နိုင်ငံ အသင်း ကဏ္ဍ မှာတော့ ဥရောပ နေးရှင်းလိဂ် မှာ နယ်သာလန် နဲ့ ဒုတိယဆု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဗန်ဒိုက် ကိုယ်တိုင် ကတော့ မက်ဆီ ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစား သမား အဖြစ် ဘောလုံး ကစား နေသမျှ ကာလ ပတ်လုံး သတ်မှတ် လို့ ရနိုင် မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့သလို ချန်ပီယံ လိဂ် မှာ မအောင်မြင် ခြင်း နဲ့ တိုင်းတာလို့ ရနိုင် မှာ မဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။
ယခင်နှစ်တွေ တုန်းက လည်း ဒီလို သတင်းပေါက်ကြားမှု တွေ ရှိခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီနှစ် မှာ ရော မက်ဆီ က အမှန်တကယ် ရွှေဘောလုံး ဆု ကို ဆွတ်ခူး သွားနိုင် မလား ဆိုတာ ကတော့ . . . .